Dzidza Maitiro Ekumisikidza Bhizinesi Kiredhiti kune yako Corporation
Makambani Anopindirwa anopa akawanda mapurogiramu ekuvaka kambani kiredhiti. Tinogona kukupa iwe nzira yekuparadzanisa yako wega kiredhiti kubva kubhizinesi rako. Kubudikidza neyedu yakasarudzika maitiro, isu tinomanikidza yakajairika makore 4-6 ekumisikidza bhizinesi uye kuwana chikwereti pasi kusvika chete kune manomwe kusvika mazuva gumi nemana, tichigadzira nyowani yechikwereti chimiro zvichienderana nenhamba yako yeID ID uye kugona kukodzera.
Kana iwe uchida $ 20,000 kusvika $ 400,000 kana kupfuura muchikwereti, fona kana kuzadza fomu kurudyi.
Yedu vimbiso: Kana iwe ukatevera chirongwa chedu uye isu tikasawana iwe kiredhiti hazvikubhadhare iwe zana.
Fonera 1-888-444-4812 kuti uwane ruzivo
Uye zvakare, ne Series LLC, munhu anogona kuve nekambani imwe uye yega yega nhepfenyuro inogona kuseta yakaparadzaniswa chikwereti chimiro. Izvi zvinogona kuwanda huwandu hwechikwereti icho munhu chaanogona kuwana nenhamba yezviteedzero izvo munhu aanosarudza kugadzira.
Nenzvimbo yazvino yemari isu hatina zvirongwa zveavo vane FICO mamakisi asingasviki 640. Kune avo vanhu, bvunza nezve chirongwa chedu chekugadzirisa zvikwereti.
Unogona kuve neprofile yako yakagadzirirwa iwe uye kupihwa maturusi uye zviwanikwa zvekukurumidza kumisikidza bhizinesi kiredhiti - kana kuti tiite basa rese rako. Isu tinopa chirongwa chiri 95% maoko-kure, ichirega nyanzvi dzemakambani echikwereti dziite basa. Maona Ese Makambani Echikwereti Zvirongwa
Tora chikwereti chekambani - Kupatsanura yako pachako bhizinesi kiredhiti kunogona kupa zvinotevera mabhenefiti:
Zvirinani Kubhadhara Mitemo (Net 30 kana Net 60)
Bhizinesi kiredhiti kadhi
Dzemotokari dzinorendesa pasina chako wega vimbiso kana wega chikwereti cheki
Bhizinesi kutanga-up uye kukura capital
Yakaderera mutengo, yakakwira kudzoka
Paunongotanga Kambani Kiredhiti zvinokwanisika kuwana:
Mitsara yechikwereti & Zvirinani Kubhadhara Mitemo (Net 30 kana Net 60)
Nguva Yekutangisa Bhizinesi Chikwereti
Plain uye yakapusa, iwe unoda kuvaka bhizinesi kiredhiti kambani yako isati yaida! Hapana institution inoda kukweretesa, kudyidzana nayo, kana kuvimba nekambani isingakwanise kuratidza kugadzikana kwayo kwemari. Saiye muridzi webhizinesi iwe unofanirwa kutanga kufunga nezvekuvaka nhoroondo yechikwereti uchangopinza. Iwe unogona kuita izvi nekuwana yako D&B DUNS Nhamba. Maitiro aya anokwanisika, kungoita neCorporate kana Yakatemerwa Liability Kambani (LLC), uye kushandisa yako nhamba yekuzivisa mutero (EIN).
Kana maofficial uye varidzi vachishandisa avo pachavo echikwereti profiles kuwana kiredhiti kana kuwana kiredhiti kadhi kune bhizinesi, vanoisa panjodzi mukana wechikwereti chega, uye kunetesa chifukidziro chekambani nekubatanidza kusangana kwezvemari. Pane zvikonzero zviviri varidzi vebhizinesi vanofanirwa kuyedza kusashandisa vimbiso yako mune ino mamiriro.
Iye wega anosaina ane mhosva kana bhizinesi risingakwanise kubhadhara
Iyo kiredhiti yakawanikwa kune iro bhizinesi inogona kukonzera kubatwa kweako wega zvinhu.
Ramba uchifunga, bhizinesi chikwereti ratings dzakanyorwa zvakanyanya nenzira imwecheteyo seako ako echikwereti zvikoro. Izvo zvakagadzirwa zvichishandisa zvinhu zvakati wandei, zvinosanganisira: inowanika kiredhiti, huwandu hwenhare inowanikwa, nhoroondo yekubhadhara, nhoroondo yekuyerera kwemari, uye zvimwe zvakawanda zviratidzo zvemari.
Kuwana mitsara yechikwereti kune bhizinesi chiitiko chinosimbiswa nekufamba kwenguva. Iro rakura bhizinesi, hunowedzera sarudzo iyo ichave nayo yekuvaka chikwereti uye kuwana zvikwereti pasina kushandisa kwega vimbiso. Zera rinobvumidza mabhizinesi mazhinji kuratidzira kuvimbika kwavo uye kugadzikana kwemari, asi izvi hazvifanire kudzora mabhizinesi madiki kubva kuyedza kunyorera mitsara yechikwereti. Nzira yakanakisa yebhizinesi diki inogona kuratidza kuvimbika kwavo ndeyekusimbisa yavo D&B chikwereti mushumo.
Vaka Kambani Kiredhiti
Makambani Akabatanidzwa akagadzira chirongwa chekupa rako bhizinesi maturusi ekukubatsira iwe kupatsanura bhizinesi rako nemari yemunhu. Nekungogadzira iyo nyowani yechikwereti nhoroondo zvichienderana neyako Mutero ID Nhamba
Zvese zvinotanga neyedu Chikwereti Chakavaka Chirongwa, iyo ichaumba iyo nyowani chikwereti chimiro uye zvibodzwa. Chinangwa ndechekumisikidza makambani zvikwereti mazana makumi manomwe nemashanu kana zvirinani Mukuenzanisa mamakisi makumi masere akafanana nekuva nechikwereti chako mazana masere: Icho chikwereti chakanakisa. Isu takaunganidza uye takaita kuti zviwanikwe, echikwereti mamakisi masisitimu ekutanga ekuzivisa masangano.
Chikamu chekwereti chakavakwa nekuve nemitsetse yechikwereti, makadhi echikwereti, maakaunzi uye mareferensi ekutengeserana ayo anomhan'arira kubhizinesi rechikwereti mahofisi. Kune mazhinji mabhizinesi zvakawoma kuwana mukweretesi anoda kupa akawanda mafomu emakambani chikwereti asina vimbiso yemunhu pasina chero yapfuura bhizinesi nhoroondo yechikwereti. Kana iwe uine zvako zvekutengeserana mareferenzi, isu tinoshanda navo kuvaka mamaki. Zvisinei mabhizinesi mazhinji anoda mamwe mareferenzi ekutengeserana anomhan'arira kumakambani echikwereti ayo anovhura mitsara yechikwereti uye otanga kuzivisa kumahofisi makuru Kunyangwe maitiro acho achiwanzo kutora nguva yakataurwa pamusoro, pano neapo mwedzi mina kusvika mitanhatu inodikanwa kune vatengesi vanonyatso simbisa kune inoshuma agency.
Isu tinopa nhungamiro yekuti ungasarudza sei makambani anozopa bhizinesi rako nechikwereti chiriporipo. Chikamu chechirongwa ichi chiri kukubatsira iwe neese mashandiro uye maitiro ekuzivisa uye pamwe nekusarudza mabhizinesi anozopa kiredhiti kukambani yako. Iwo makambani atinoshanda nawo anozivisa zviitiko zvekubhadhara kumahofisi echikwereti - uye nekupa zvikwereti pasina vimbiso yemunhu kana kudiwa kwekutarisirwa kwechikwereti.
Makambani anoda kuburitsa kiredhiti nekuti vatengi vavo havatariswe sengozi huru. Chikonzero ivo vasingatariswe kunge chakanyanya njodzi ndechekuti varidzi vebhizinesi vanoshuvira kuvaka yavo bhizinesi kiredhiti nekudyara muchirongwa chekambani chekuvaka chikwereti.
Isu tiri nhengo yeDun & Bradstreet Credibility Corp.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaGunyana 11, 2018